Dolara Amerikana, Zon’Olombelona & Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2017 5:27 GMT
Miresaka lohahevitra mafana i Mehrangize Kar, mpikatroka ny zon'olombelona, ​​mpisolovava & bilaogera monina any Etazonia: 75 tapitrisa dolara Amerikana manampy amin'ny fampiroboroboana ny demaokrasia ao Iran. Tsy mino izy fa afaka manampy ireo mpikatroka ny zon'olombelona Iraniana ny dolara Amerikana. Hoy izy:
“Tsy ny governemanta ankehitriny ihany fa ny fitsaratsaràn'ny hevi-bahoaka Iraniana no hanakana ny asan'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona izay mahazo fanohanana ara-bola avy any ivelany.” Mety ho lasa ahiahiana eo imason'ireo Iraniana izy ireo. Ny fitomboan'isan'ireo sahirana, mahantra sy ny lasibatry ny herisetra sy ny olana ara-tsosialy hafa ao Iran no hanakorontana ny biraon'ny fikambanana izay mahazo famatsiam-bola vahiny mba hitakiana ny anjaran'izy ireo amin'ireny vola ireny. Azo atao mihitsy aza hoe olona mpiray tsikombakomba ao anatin'ny governemanta no handrisika vondron'olona toy izany mba hanakatona sy hamotika ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona mahazo famatsiam-bola vahiny. Raha jerena ny zavatra nataon'ny governemanta Iraniana taloha momba ny famolavolana tranga tahaka izao, toa tsy ho tahaka izao ny vokatra hiseho.
Raha hafohezina, azo lazaina fa mikendry hanatsara ny fepetra ankehitriny ny fomba ara-politika rehetra, raha tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ao anatin'ny toe-javatra ao iainan'i Iran izany, dia lasa mifamatotra aminy ary hanimba ny fandrosoana voafetra izay efa tratra eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona ao Iran. “
Tao amin'ny blaogy Webgardian, noresahan'ireo Eoropeana sy ny Amerikana bilaogera na tsy bilaogera ny lohahevitra mitovy amin'izany.
Spirit of Man, bilaogera monina ao Kanada, miresaka momba ny fifampihenjanana eo amin'i Etazonia sy i Iran. Hoy izy:
“Nanolo-kevitra ny antoko Iraniana mahery fihetsika manara-maso ny parlemanta Islamika sy ny governemanta, antsoina hoe Abadgaran, fa tokony hitarika hetsika miaramila miaraka amin'i Kiobà, Venezoela sy ireo firenena hafa manohitra ny Amerikana ao amin'izany faritra manerana izao tontolo izao izany i Iran mba handefa hafatra ho an'i Etazonian'i Amerika. “
Hanif Mazroi (Persiana), mpanao gazety sady bilaogera reformista ao Iran, nilaza fa mampatsiahy ny ady Iran-Iraka ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fahitalavitra Iraniana. Momba ny angovo nokleary sy ny vahoaka nampahoriana ao Iraka ny fampielezan-kevitra! Milaza izy fa toa nifoha ny fahitalavitra Iraniana ary nahatsapa tampoka fa misy ady any Iràka! Nampiany koa fa tsy fantany ny tanjon'izany fampielezan-kevitra rehetra izany.